१२.५०% बोनसमा मूल्य समायोजनपछि प्राइम लाइफको कतिमा खुल्यो सेयर कारोबार ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » १२.५०% बोनसमा मूल्य समायोजनपछि प्राइम लाइफको कतिमा खुल्यो सेयर कारोबार ?
काठमाडौं - प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सको १२.५०% बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन भएको छ । बोनस समायोजनपछि प्राइम लाइफको सेयर प्रतिकित्ता ५५१ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ । कम्पनीले उक्त मूल्यलाई आधार मानेर बुधबार सेयर कारोबार खुला भएको छ । प्राइमको औसत आधार मूल्य भने ७२६ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ ।
प्राइम लाइफले हालैमात्र १६०% हकप्रद बिक्रीपछि कायम हुने चुक्ता पुँजीको १२.५% बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको हो । अहिले कायम पुँजीको ३२.५% भए पनि बिक्री खुला भइरहेको १६०% हकप्रद भर्नेले समेत बोनस पाउने हुँदा वास्तविक बोनस दर १२.५% हुन गएको हो । प्राइमले आइतबार (फागुन २७ गते) देखि १६०% हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरिरहेको छ ।